Debe Mac gị na ngwa ndị a na-ere maka obere oge | Esi m mac
Anyị laghachiri ibu na Esi m mac n'ihi na ọ dịghị ihe dị mma iji mee ememe na anyị nọ n'etiti izu ọrụ karịa ime ya na a nhọrọ nke ngwa na-enye, nke ndị bara uru na nke anyị nwere ike ịnwe n'efu ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'efu. Na nke a, m gwa Abigel atọ-akpali nnọọ mmasị ngwa nke ị nwere ike dobe ngwa gi optimizing disk disk ị na-eji ma na-eme ka ọ dị mma site na obi software si n'ebe.
Ma echefula, ma e wezụga maka ndị ọzọ, naanị ihe anyị nwere ike ịkwado n'aka Soy de Mac bụ nke ahụ Onyinye dị ugbu a n'oge mbipụta post a, ma anyị anaghị amata mgbe ha ga-akwụsị n'ihi na ndị mmepe anaghị akpọsa ya ma ebidobeghị m ịkọ ọdịnihu. Yabụ, ọ bụrụ na ị nwere mmasị na nke ọ bụla n'ime ha, echela nke ukwuu, zụta ya, ọ bụrụ na emesịa ọ bụghị ihe ị tụrụ anya ya na ị nwere ike iweghachi ya wee weghachite ego ị kwụrụ maka ya. Anaghị m Mac ma ọ bụ na enweghị m ihe ọ bụla jikọrọ m na ngwa ndị a, yana ndị mmepe ha ma ọ bụ site na onyinye ha chọrọ. Anyi ka anyi bido?
1 BitMedic AntiVirus - Malware & Adware Nchedo
2 Disk Cleaner - Hapụ oghere draịvụ ike gị
3 Foto na-efu efu onye na-ese foto
BitMedic AntiVirus - Malware & Adware Nchedo
Ọ dị mkpa ịnwe antivirus na kọmputa Mac anyị? Nke a bụ ajụjụ na-ese okwu, na azịza nke ọtụtụ agaghị amasị. Ndị kachasị ọcha ga-agọnarị eziokwu, eziokwu bụ na, ka kọmputa Apple ndị a ma ama bụ, ka ha na-enwekwu mmasị na ha n’etiti ndị na-eme ihe ọjọọ ya mere, ka anyị nwere ike ibute ụdị ụfọdụ nke malware. Na ihe atụ nke a anyị nwere. N'iburu nke a n'ime akaụntụ, ọ gaghị afụ ụfụ ịnwe na Mac anyị Antivirus BitMedic, a adịchaghị Atiya ngwa kpọrọ na iri isii euro na ugbu a na-eme ememe ya nde abụọ downloads site ẹsụhọde ya price ka naanị € 1 maka obere oge.
BitMedic Antivirus - Malware na Adware Nchedo awade ọtụtụ ọrụ na atụmatụ ndị ga-edebe data gị na nchekwa gị yana na m na-akpọ gị ka ị kpachara anya, agbanyeghị, otu n'ime akụkụ ndị pụtara ìhè bụ na e mepụtara maka Mac, «na-enye a mfe nchebe na 3 nzọụkwụ -enye gị kacha nche ma na-gị Mac mma si agha.
Igwe Mac zuru ezu - Nyocha ngwa ngwa na nyocha miri emi
Omenala nchọgharị - Njikwa ihe nchọgharị dị mfe dịka ịdọrọ na dobe
Nlekọta Ahụike - 24/7 ezigbo oge nchebe
Ọ bụrụ na ị na-achọ nchedo maka Mac gị, ugbu a ị nwere ohere ịnweta ngwa adịchaghị na ọnụahịa mbelata ego, mana echela ọtụtụ ihe banyere ya maka na onyinye a nwere ike ịnwụ na "cerocoma".
BitMedic® Pro Antivirus9,99
Disk Cleaner - Hapụ oghere draịvụ ike gị
Ihe nhicha diski es a "disk Cleaner" na onye mfe na ngwa ngwa ọrụ ị nwere ike tufuo niile na "junk" na-agbakọtara na eriri afọ nke anyị Mac Nke ahụ abụghị naanị na-ewe ohere bara uru maka ihe ndị ka mkpa, kamakwa ọ ga-akwụsịlata kọmputa anyị.
Disk Cleaner na-arụ ọrụ niile maka gị! Anyị arụgoro ebe kachasị rụọ ọrụ nke ọma iji nyochaa ngwa ngwa ma wepu junk niile na-ewe ohere disk gị dị oke ọnụ. Kwụsị imefusị ohere na faịlụ ndị na-enweghị isi fọdụrụ site na ngwa ndị ewepụrụ, faịlụ ịntanetị nwa oge, mgbakwunye email ochie, yana ndị ọzọ ị maghị. Kwe ka Disk Cleaner hapụ ohere draịvụ ike gị!
Mepụtara otu ìgwè nke BitMedic AntiVirus, Disk Cleaner Eburu ya ọnụ na € 2,99 mana ugbu a ị nwere ike nweta ya naanị € 0,99 maka obere oge.
Disk Cleaner - Free HD Oghere2,99
Foto na-efu efu onye na-ese foto
Anyị na-emecha nhọpụta nke ngwa anyị n’etiti izu na-enye ya Foto na-efu efu onye na-ese foto, a image Compressor nke ga-ebelata oke ha enweghị ọnwụ mma, na - echekwa ohere nchekwa na draịvụ ike gị yana ịkekọrịta foto gị dị mfe na ọsịsọ.
Ọ nwere ụzọ atọ eji eme ihe: ọnọdụ ọnwụ (png, jpg, gif), ọnọdụ ọnwụ (jpg) na ọnọdụ PNG 8-bit.
Lossless Photo Squeezer bụ ọnụ € 6,99 ma ugbu a ị nwere ike nweta ya enwere kpamkpam n'efu maka obere oge.
Onye na - ese foto na - efu efu - Belata nha onyonyofree
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Debe Mac gị na ngwa ndị a na ere maka obere oge